Sida loo dufto wax ka bedel sawirrada (badan) Gimp - Ikkaro
Inicio >> Software >> Sida wax looga beddelo sawirrada dufcadaha ama dufcadda (tiro badan) oo leh 'Gimp'
Sida wax looga beddelo sawirrada dufcadaha ama dufcadda (tiro badan) oo leh 'Gimp'
Adeegso Gimp sida tifaftire sawir iyo muuqaal ah. Ma taaban Photoshop dhowr sano. Xitaa markii aan isticmaalayay Windows waan joojiyay isticmaalka Photoshop maxaa yeelay ma aanan rabin inaan jabsado.
Waxaa jira siyaabo kala duwan oo wax looga beddelo sawirrada badan, tiro badan, dufcado ama tiro badan, wax kastoo aan dooneyno inaan ugu yeerno. Laakiin fidintaan 'Gimp' waxay aniga ila tahay mid aan looga maarmin. Noo ogolaada sawiro cabir ah, ku dar calaamado, rogrog, qaab beddel, yaree miisaanka iyo ficillo kale oo badan oo aan ku qaban doonno si ballaaran iyo waqti aad u yar. Ma rumaysan doontid waqtiga aad kaydin doontid.
Waxaan u adeegsadaa inta badan inaan ku saxo sawirrada maqaallada maqaalka. Si sax ah ayaan u qiyaasayaa, waxaan ku daryaa calaamadeynta, waxaanan yareynayaa miisaanka ilbiriqsiyo gudahood. Laakiin waxaan u arkaa inay waxtar u leedahay dad badan marka laga reebo Webmasters-ka, sawir qaadayaasha doonaya inay ku daraan astaamo-biyoodyo. Ama haddii aad rabto inaad beddesho cabbirka dhowr sawir ama sawirro isla waqti isku mid ah
Waxaan kaaga tagayaa marka hore waxa ay qabato ka dibna sida loo rakibo haddii aad xiiseyneyso.
Ku farsamee sawirada guntin ama dufcad
Waxaa jira tusaale waxa aan ku sameeyo maqaallada. Halkan waxaan horeyba ugu rakibnay Gimp. Waxaan uga tagayaa fiidiyoow tusaale ah meesha aan miisaameyno, aan ku darno calaamadeynta oo aan yareyno miisaanka si ballaaran ama dufan.
Haddii aad jeceshahay sawirada, waxaad leedahay shaashadda iyo tilmaamaha nidaamka
Waxaan ka furaynaa Faylka> Batjc Maareynta Sawirka
Daaqadda fiilada ayaa ka muuqan doonta gobollo kala duwan iyo xulashooyin, oo aan ku sharraxeyno fiidiyowga. Waad ku dari kartaa saameyn kala duwan oo waxaad ku maareyn kartaa sawirada siyaabo badan. Waxaad ka arki doontaa badhanka Add
Waxaad awoodi kartaa
Dib u cabbir, goo, ku dar calaamadeynta, qaabka isbeddelka, cadaadin, isbeddelka dhalaalka, midabka, dhererka, iwm, iwm, iwm ku dhowaad hawl kasta oo aad ka hesho Gimp.
Kuwani waa qaar ka mid ah xulashooyinka kala duwan. Haddii aad gasho nidaamka kale ee GIMP waxaa jira kuwa kale oo badan. Hore u soco oo caleenta oo samee xoogaa cilmi baaris ah
Halkan waxaan ku aragnaa menu-ka soo baxa marka aan dooneyno inaan kor u qaadno sawir.
Kadibna waxaan ku darnaa calaamadeynta, kiiskeenna waxaan doorannaa sawir aan horey u haysannay oo ah duulimaad tan
Ugu dambeyntiina, waxaan yareyneynaa miisaanka dhammaan sawirrada ka hor inta aanad u gudbin shabakadda.
Iyadoo la adeegsanayo Waxyaabaha Waxqabadka ah ee la sameeyay, waa inaan kaliya dooranaa sawirada si aan u saxno una qeexno galka wax soo saarka. Waxaad la yaabi doontaa xawaaraha ay ku saxantahay sawirada. Ma aqaano sababta aan u dheeraaday anigoon isticmaalin.
Sida loogu rogo sawirada jumlada
Waxaan ka tagayaa fiidiyoow tusaale qaas ah si aan u wareejiyo sawirada noogu adeegaya mawduuca digitization of buugaagta.
Sida loo rakibo BIMP (Qalabaynta Mashiinka Sawirka)
Haddii aad ka heshay, waxaad u baahan doontaa inaad isticmaasho GIMP oo ah barnaamij bilaash ah oo isku-dhaf ah oo ka dibna ku rakib qalabka BIMP
Hababka kale ee duubista muuqaalka dufcadda ah
Waxay ku saabsan tahay David Dufcaddii Processor barnaamij yar oo loogu talagalay wax ka beddelka sawirka ballaaran. Kuma xirna GIMP mana aanan isku deyin laakiin waan ku talo jiraa
Categories Software Tigidhka tigidhka
Bustada kululaynta si ay u soo baxdo iniinyaha
6 faallooyin ku saabsan "Sida wax looga beddelo sawirrada dufcado ama dufcad (in badan) leh Gimp"
Diseembar 8, 2018 at 2:02 am
Aad baad ugu mahadsantahay sharraxaadda, runtii waxay noo fududeyn doontaa inaan dib u cabbirno oo aan ku calaamadinno sawirradeena daabacaadda.
Diseembar 8, 2018 at 10:38 am
Aad baan ugu faraxsanahay maqalkiisa. Runtii waa wax aad u faa'iido badan.
June 13, 2019 at 11:56 waxaan ahay
Hadda daaqadaha, horeyba bartamaha 2019, waxa ugu fiican ayaa ah, si toos ah, si loo rakibo GIMP 2.10, oo leh shaqadan isku dhafan. Dhamaan wanaag.
Maarso 28, 2020 markay ahayd 9:17 am
Nabadeey Ciise, kuma arko doorashadaas Gimp 2.10, waxaan isku dayayaa inaan yareeyo cabirka dhowr sawir isla waqtigaas si aan warbixin uga sameeyo mana awoodo.
Maarso 28, 2020 markay ahayd 1:27 pm
Hambalyo Oscar, ma aanan helin oo aakhirkii waxaan rakibay qaybta BIMP sida aan ku idhaahdo maqaalka oo si weyn ayey iigu shaqaysaa
Oktoobar 2, 2020 markay tahay 2:47 pm
Nabadeey Ciise, kama heli karo doorashadan GIMP 2.10 midkoodna
Juun 13, 2019 markay ahayd 1:31 pm
Salaan ciise. Waxaan fiirinayaa gimp 2.10 oo ku yaal Ubuntu mana arko. Ma ogtahay meesha ikhtiyaarku yaalo?
Ogosto 28, 2020 markay tahay 7:36 pm
aad u wanaagsan !! Mahadsanid
1 Ku farsamee sawirada guntin ama dufcad
2 Sida loogu rogo sawirada jumlada
3 Sida loo rakibo BIMP (Qalabaynta Mashiinka Sawirka)
4 Hababka kale ee duubista muuqaalka dufcadda ah